UBANI W E ARE Shandong Oree Laser ubuchwepheshe Co.Ltd
Singabantu inkampani ephethwe Shandong OYADE iqembu, etholakala e Jinan North wezokuThuthukiswa koMnotho zone, JiYang epaki zezimboni, ungumnikazi abasebenzi 300, 1000 square metres ucwaningo nokuthuthukisa isikhungo, 42000 square metres workshop.
Shandong Oree Laser ubuchwepheshe Co.Ltd
Zonke lezi Equipments ziye kabanzi ukukhiqizwa esebenzisa ugesi, izifunda ehlangene,
ezokuxhumana Equipments, amakhompyutha, izingxenye auto, ingilazi namayunithi optical, zokwakha,
amadivaysi ezokwelapha, jewelries, izinto emabhokisini yezandla, imfashini kanye izingubo, okukhanyisa zasemadolobheni kanye nakweminye imikhakha.
Ngamunye umkhiqizo Oree Laser akuvunyelwe wahlola ngokuvumelana ISO9001 (QC) ejwayelekile ngaphambi lufakwa emakethe. Abaningi imishini laser uchungechunge ngiye ngazuza CE, isitifiketi FDA.
Oree Laser ukugxila value kwamakhasimende, kudala aphakeme ngaphezulu cusotmer ukubaluleka kuka izimbangi. Imikhiqizo yethu kudayiselwa USA, Canada, Australia, eYurophu, South empumalanga Afrika ect, emazweni angaphezu kuka-80 futhi indawo.